Iphrofayela Yenkampani - I-HEBEI ORIENT IMPORT & EXPORT CO., LTD
I-ORIENTMED yasungulwa ngo-1991. Siyinkampani yobuchwepheshe ikakhulukazi esebenza emikhiqizweni yezokwelapha. Ngokuya ngamanani entengo asezingeni eliphakeme namanani afanele, sizuze idumela elinomthwalo wemfanelo ezifundeni eziningi ezahlukahlukene, njengeGerman, France, Kazakhstan, Russia, Kuwait, Australia, South Africa, United States njalonjalo.
Yonke imikhiqizo yethu ivunyelwe ngezitifiketi ze-CE, ISO, FDA ngokulandelana.
Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka ngokulandelayo:
Isirinji elahlwayo: Isirinji egcwalisiwe, inaliti ye-hypodermic, ukumiswa kokumiswa, i-scalp vein set, i-IV cannula, i-lancet yegazi, isikhumba, ithubhu yokuqoqa igazi, izikhwama zegazi, izikhwama zomchamo.
Amagilavu ​​alahlwayo: ezifana amagilavu ​​latex, nitrile amagilavu, vinyl amagilavu ​​futhi PE amagilavu.
Imikhiqizo elahlwayo engavukiwe: ezifana nesifihla-buso sobuso, ikhava yezicathulo, izigqoko zeMob, izigqoko zeBouffant, izigqoko zokuhlinza, ingubo, okokugqoka, amaphedi wokulala, ngaphansi kwamaphakethe, imikhono njll.
Ukugqoka kwezokwelapha: kufaka phakathi amabhandeshi okunamathela okunwebeka, amabhandeshi ahlanganayo, i-PE, amateyipu anga-alukiwe ne-Zinc oxide, ukhonkolo wenxeba, ukhonkolo njll.
Izinsiza zokwelapha zokuvuselela: njengesihlalo esinamasondo kagesi, isihlalo esinamasondo se-aluminium, isihlalo esinamasondo sensimbi, isihlalo sabakhubazekile esihamba ngezinyawo, ukuhamba ngezinyawo, inqola, induku nezinduku njll.
Amakhithi wokuhlola wokuhlola: njengokuhlolwa kokukhulelwa, ukuhlolwa kwe-ovulation, i-HIV, i-HAV, i-HCV, i-Malaria, i-H-pylori, njll.
Ikhithi yamazinyo: kufaka phakathi isirinji yamazinyo, ikheshi lamathe, i-forceps ephele kabili, iphenyo yamazinyo ephela kabili, i-stomatoscope njll.
Imikhiqizo yabesifazane: njenge-speculum yesitho sangasese sowesifazane, i-swab, i-urab swab, ibhulashi lomlomo wesibeletho, isipuni somlomo wesibeletho, i-rambrush yomlomo wesibeletho, i-endometrial suction curette, i-spatula yomlomo wesibeletho, i-spatula yokhuni, amakhithi wabesifazane.
Imikhiqizo yokubulala izinzwa
Imikhiqizo yekhemisi: njengokuqapha umfutho wegazi, imitha yeGlucose, ibunzi kanye ne-thermoeter yedijithali, i-Fingertip oxymeter, i-Automatic soap dispenser.
Besilokhu sigxile kwikhwalithi ephezulu kanye nenqubo yokukhiqiza izimpahla zethu kusukela ekuqaleni kokusungula ubudlelwane bebhizinisi namakhasimende ethu emhlabeni. Sizoqhubeka nokuchuma ukwenza insizakalo yethu ibe ngcono futhi silindele ukusungula ubudlelwano obunokwethenjelwa namakhasimende amaningi emgqeni wemikhiqizo yezokwelapha elahlwayo kungekudala.
Ukuba ibhizinisi elihle kakhulu wonke amakhasimende athembayo nabasebenzi abathandayo!
Ukusiza izintonga zikhule futhi zisebenzisane ukudala ubuhlakani!
Ukuziphatha: impilo, ukuzethemba, ukwethembeka, ukwabelana, ukubonga! Isenzo: ubungcweti, ukusebenza kahle, ukusebenzisana, intshisekelo, nokuwina-win!